Qarax ka dhacay Muqdisho oo dhaliyay Khasaare Dhimasho & dhawac leh – SBC
Qarax ka dhacay Muqdisho oo dhaliyay Khasaare Dhimasho & dhawac leh
Mid ka mid ah dadka rayidka ah ee ku dhaqan degmada dharkinley ee magaalada Muqdisho ayaa ku geeriyooday qarax maanta halkaasi ka dhacay kaas oo loola damacsanaa gaadiid uu saarnaa gudoomiyaha degmadaasi Macalin Cabdulle .
3 qof oo uu mid ka mid ahi yahay ilaaladii gudoomiyaha degmada Dharkinlay ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi, waxaana uu dhacay qaraxu xili ay goobta uu ka dhacay ay marayeen gaadiidka Gudoomiyaha uu saarnaa .
Qaraxaasi ayaa ahaa nooca dhulka lagu aaso, wax khasaare ahna ma gaarsiin gudoomiyaha sida uu nafsad ahaantiisu u sheegay saxaafada Afka soomaaliga ku hadla.
Waxa uu sidoo kale gudoomiyuhu intaasi ku daray in ay soconayaan baaritaano lagu doonayo in lagu soo qabqabto qaraxaasi kooxihii geystay isagoona dusha u saariyay masuuliyada qaraxaasi Xarakada Alshabaab .
Inkastoo aan jirin war ka soo baxay xarakada Alshabaab oo lagu sheeganayo ama lagu burinayo eedeynta gudoomiayaha deg Dharkinlay ayaa hadana waxaa qaraxaasi uu ahaa nooca dhulka lagu aaso islamarkaana laga hago rimuudka.
Sikastaba ha ahaatee qaraxan maanta ka dhacay degmada Dharkinley Muqdisho ayaa imanaya xili ay isla degmadaasi ka jiraan xiisado beeleed halkaasi ka jira iyadoona ay ku wada suganyihiin halkaasi laba ciidan oo tiro dhowr jeer halkaasi uu isku dhac ku dhexmaray.